फूल "महिला आनन्द", वा Spathiphyllum - रोचक बिरुवाहरु, पहिलो आफ्नो नाम सम्बन्धित त्यो गर्न विशेष ध्यान छ। यो फूल त्यो बाटो भनिन्छ किन छ छ? लोकप्रिय विश्वास अनुसार, यो बोट भाग्य घरमा, यो एक विशेष ऊर्जा दिने ल्याउँछ। तर तिनीहरूलाई ल्याए थियो आनन्द, सजिलो छ, तर यो महिला छ! यो सबै को पहिले प्रेम एक, एक विवाहित महिला लागि पारिवारिक जीवन मा एक जवान केटी र आनन्द लागि दुलही को खोज जोडिएको छ। यो पनि एक महिलाको आनन्द - यो पनि यी रंग को घर मा उपस्थिति बालिका गर्भवती प्राप्त गर्छ कि विश्वास छ।
तर, अर्को सिद्धान्त, थप सजिलो छ। "महिला आनन्द" किनभने आफ्नो उपस्थिति को नाम एक बोट, यसको फूल दुलही गरेको विवाह पोशाक जस्तो किनभने छ।
Spathiphyllum - एक बारहमासी बोट, जुन हामीले किनभने प्रकृति मा यो लगभग फेला परेन, केवल घरमा देख्न सक्छौं। Inflorescence "महिला आनन्द" - को कान thickened छ सफेद-पहेंलो रंग सामान्यतया रंग मा सफेद, एक चमकदार पाना संग र्याप छ जो को आधार मा। फूल समय बित्दै पछि, सेतो फूल को एक पाना बिस्तारै यसको रंग, पातहरु बाँकी रूपमा हरियो बनेर परिवर्तन। एक फूल, हेरविचार चयन प्रजातिहरू बिना सजिलो छ - यो बोट को धेरै किसिमहरु, तर "महिला आनन्द" छन्। घरमा हुर्केका छन् जो Spathiphyllum को मुख्य प्रकार समावेश:
Spathiphyllum वालिस। यसको पात (लगभग 20 सेन्टिमिटर लामो) अलिकति तरंग छ, उचाई मा 40 सेन्टिमिटर - "महिला आनन्द" यस प्रकारको 30 छ। माथि वर्णन, यो कली पछि सेतो साग inflorescence।
Spathiphyllum Domino अघिल्लो प्रकार आकार देखि सानो अलग, र एउटा सेतो inflorescence छ, तर यसको पात किनाराको एक तरंग आकार छ।
प्यारो Spathiphyllum - फूल जसको उपस्थिति अघिल्लो व्यक्तिहरूलाई देखि markedly फरक छ। को Spathiphyllum को inflorescence, हरियो रंग छ प्रशस्त मात्रामा बढ्छ। यसलाई दुई पटक एक वर्ष "महिला आनन्द" छ blooms, तिनीहरूलाई हेरचाह कुनै फरक छ।
Spathiphyllum फूल - सामान्यतया सँगी tribesmen माथि बढ्छ कि प्रकारको। Inflorescence यो पनि सेतो छ, तर केन्द्रीय spadix - हरियो।
बिरुवाहरु को सबै प्रकार कवर सिल मात्र रंग, (को inflorescence को सामान्यतया सेतो भाग) र आकार फरक, एकदम समान छन्।
एक फूल - आफ्नो "महिला आनन्द" वृद्धि गर्न अवलोकन हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत आवश्यकताहरू विचार गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई हेरचाह कुनै पनि अन्य बोट हेरचाह मिल्दोजुल्दो छ। तपाईंले यसलाई चिस्यान को पर्याप्त रकम छ भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ, तर यो pereuvlazhnyat छैन, पनि प्रेम। यसलाई पर्याप्त चिस्यान छैन भने, तपाईँले बिरुवाहरु को टुक्रा पहेंलो बारी गर्न थाले देख्ने र अतिरिक्त चिस्यान भने, त्यसपछि यसलाई कालो स्पट प्रकट हुनेछ। एक हप्ताको धेरै पटक पानी संग पात स्प्रे गर्न नबिर्सनुहोला। यो विशेष गरी फूल समयमा, पर्याप्त न्यानो छ पक्का, तर अत्यधिक गर्मी बनाउन उहाँले रहनेछैन खुसी थियो। गर्मी, चिसो, ड्राफ्ट जस्तै Spathiphyllum को शत्रुहरू छन्। "महिला आनन्द" - एक फूल, हेरविचार जो पनि आवश्यक छ भने, किरा देखि बिरुवाहरु सुरक्षा को रुचाउने समावेश छ। अझ प्रशस्त फूल लागि यो प्राथमिकताको वसन्त, एक वर्ष एक पटक repotted गर्नुपर्छ।
तर यी यांत्रिक कार्यहरू गर्न साथै, प्रत्येक बोट आवश्यक छ र आफ्नो भावनात्मक हेरविचार कि भूल छैन। विशेष गरी यो, किनभने "महिला आनन्द" - उहाँको हेरचाह र माया समावेश जो एक फूल।
सिट्रस इन्डोर बिरुवाहरु: प्रकार, खेती र हेरविचार को सुविधाहरू
परिवार Crassulaceae - stonecrops। रोपण र हेरविचार
अनुभव माली बाट सल्लाह: गिरावट मा peonies कसरी प्रत्यारोपण गर्न
Goosebumps "वसन्त": विवरण र हेरविचार
विवाह संकेत। तपाईं दुलही ध्यान के गर्नुपर्छ
जसले चलचित्र "Bridzhit Dzhons डायरी" मा तारा अङ्कित? मुख्य पात्र खेलेका अभिनेता, र अरूलाई
Google ले संसारको सबैभन्दा महंगी र प्रभावशाली कम्पनीको रैंकिंगमा पाँचौं स्थान लिन्छ
मालिकहरुलाई "slammer": विवरण र फोटो
जेट AN 72
बच्चाहरु र वयस्कों को लागि स्वादिष्ट डिश - पनीर संग नूडल्स
Irina Metlitskaya: जीवनी र अभिनेत्री को मृत्यु को कारण